Markoos yuu ahaa? – Akhbaarta Wanaagsan
Markoos yuu ahaa?
Akhristayaasha sharafta leh, Waxaan mar kale idiin soo bandhigaynaa casharkeenii taxanaha ahaa EE Kitaabka Markoos cutubka 1-8.Ka boggasha wacan..
Yooxaanaa, Maarkoos wuxuu ahaa yahuudi kaas oo aan lahayn magac yahuudi ah, Maarkoos, Butroos wuxuu aad u jeclaa Maarkoos wuxuuna ugu yeedhi jiray wiilkaygii (1Butroos 5:13) Maarkoos hooyadiis waxay ku nooleed guri weyn oo Yerusaalem kuyaalay,qaadiga magaalada reer Israaiil iyo Goboloda oo dhan ee Reer Judeeya.waxay maqashay akhbaarta wanaagsan ee Ciise Masiix weyna rumaysatay. Masiixiyiin kale ayaa guriga Maarkoos hooyadiis ku kulmi jiray si ay ilaah ugu caabudaan kuna duceystaan (Faliimaha 12:12).
Badanaa hogaamiyaasha diintu waxay lahaayeen kuwo xer u ah iyo niman shaqadoodii katagay si ay ayaga u raacaan oo wax uga bartaan. Maarkoos wuxuu raacay Butroos, Butroos oo asaguba raaci jiray Ciise Masiix. Maarkoos wuxuu maqlay Butroos oo Ciise Masiix ka hadlaaya iyo waxyaabihii uu sameeyey. Ninkii dhalinyarada ahaa waa Maarkoose wuxuu rumaystay in Ciise ahaa Masiixa (kan Subkan).
Waqti hore, yahuudu waxay sugayeen hogaamiye weyn oo Rabbigu u balan qaaday (badbaadiye ama Kan subkan). Dadku waxay umaleynayeen Masiixu inuu ka badbaadi doono cadowgooda, cadowgaasoo ahaa Roomaankii dhulkooda xukumayay. Markoos wuxuu ahaa Barnabaas ina adeerkiis. Kadib dhimashadii iyo soo sara kicidii Ciise Masiix, Markoos waxuu raacay Bowloos iyo Barnabaas inuu Akhbaarta wanaagsan usoo sheego Aasiyada yar (Turki). Laakiin wuu katagay oo wuxuu kusoo laabtay yerusaalem. Bowloos madoonayn inuu Maarkoos u wado wacdiskiisii xigay, sidaas darted Barnabaas ayaa kaxeeyey Maarkoos oo la aaday Khubrus. Mardambe, Bowloos iyo Maarkoos waxay noqdeen saaxiibo. Bowloos xabsi ayauu kasoo qoray, Maarkoos wuu I qalbi qaboojiyey (Colossians 4:11) Markoos wuxuu qoray in Ciise Masiix ahaa wiilkii Illaah. Ciise Masiix laftirkiisa ayaa isugu yeedhi jidhay wiilka bini-aadanka. Kanu wuxuu ahaa magacii illaah siiyey Nebiyadiisii, Bini-aadanku wuxuu doortay inuu fariinta illaah kula hadlo Dadkiisa. (Ezekiel 12:2) Laakiin ilaah xataa wuxuu sheegay in Ciise Ahaa wiilkiisa (Maarkoos 1:11 9:7)
Lasoco Qaybta xegta waa cashirkeenii Tafsiirka Bibleka Markoos cutubka 1-8